Fiyetnam - Wikipedia
Fiyetnam (Vietnam) waa dawlad kutaala koonfurta bari ee qaarada Asiya. Wadankaan waxoo xuduud la leeyhay wadamada Shiinaha, Laos iyo Kambodiya. magaalo madaxda wadanka waa Hanoi. Wadankaan waxaa degan dad ka badan 85miliyan oo qof, waa wadanka 13aad oo ugu dadka tirada badan aduunka. Waddanka: / ˌvjɛtnæm, -nɑːm /, US: / ˌviːətnɑːm, -næm / (ku saabsan codkani wuxuu dhagaystaa);  Vietnamese: Việt Nam ayaa loo yaqaan [vîət nāːm] (ku saabsan codkan maqal)), ee Vietnam (Vietnam: Công hòi Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), waa wadamada bariga ee ku yaal jasiiradda Indochina. Iyadoo lagu qiyaasay 94.6 milyan oo qof ilaa sanadka 2016, waa dalka 15-aad ee adduunka, iyo wadanka 9-aad ee ugu badan Asia. Wadanka Vietnam waxaa xuduud u leh Shiinaha waqooyiga, Laos, ilaa waqooyi-galbeed, Kambodiya, koonfur galbeed, Thailand oo ku taal Gacanka Thailand ee koonfur galbeed, iyo Filibiin, Malaysia iyo Indonesia oo ku yaalla Badweynta Koonfurta Shiinaha xagga bari iyo koonfur. Magaalada caasimadda ah waxay ahayd Hanoi tan iyo markii la isku keeney Waqooyiga iyo Koonfurta Sannadkii 1976-kii, iyada oo Ho Chi Minh City u ahayd magaalada ugu badan.
2 waddanmaha degeen vietnam
4 Deegaanka Vietnam
AIIB Qaramada Midoobay
waddanmaha degeen vietnamEdit
United States 2000+
United Kingdom 500+
wadankani waxa uu ka koobanyahay 63 gobol.waxa ayna u kala baxaan sidan..
, Binh Phuoc
Indochina au sègle V ap. J.C.
Retrach de l'emperaire Gia Long.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiyetnam&oldid=218995"
Last edited on 10 Oktoobar 2021, at 14:54
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Oktoobar 2021, marka ee eheed 14:54.